U Thein Than Oo သောင်းတိုက်ကကြားစေသား၂၄ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« မဘသ . ၉၆၉ .. ဘယ်လိုအမျိုးချစ်မှာလဲ ?
Polite arguments on our beliefs and concepts amongst Myanmar Activists abroad »
U Thein Than Oo သောင်းတိုက်ကကြားစေသား၂၄
U Thein Than Oo is my friend, classmate in Medical University, IMM. He was not happy with Medical life and changed the profession. Later he was together with my bother Maung Maung in helping the Meiktila Muslims.
Congratulations friend for your bravery, kind heart and for respecting the Human Rights of downtrodden minority religious persons like us.
ကြီး(ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး)လက်အောက်ခံဖြစ်လို့civil force, civil policingမဟုတ်ဘဲ Military policing စစ်ပုလိပ်ဖြစ်နေလို့ပါဘဲ။ ဒါကြောင့်ဖွဲ့စည်းပုံမပြင်နိုင်သမျှရဲပြုပြင်ရေးဟာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး
Don’t wing the tiger ကျားကိုအတောင်မတတ်ပါနဲ့ဆိုတဲ့ကျနော့်စာတမ်း မှန်ကန်ကြောင်း ၂၂ရက်နေ့ လက်ပံတောင်းကလယ်သူမကြီးဒေါ်ခင်ဝင်းကို ‘ပြည်ပအားကိုးပုဆိန်ရိုး’ သခင်အားရကျွန်ပါးဝတွေကပစ်သတ် သက်သေပြလိုက်ပါပြီ။
ရှေ့နေများကွန်ရက်နဲ့Justice Trust ကလက်ပံတောင်းဖြိုခွဲမှုမှာမီးစုံးဖြူလက်ပစ်ဗုံးတွေ
This entry was posted on December 27, 2014 at 2:49 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.